Ma jiri doonaan wax isbadal ah siyaasada cusbooneysiinta Android One | Androidsis
Google waxay xaqiijineysaa inaysan jirin wax isbeddel ah oo ku saabsan siyaasadda cusbooneysiinta Android One
Eder Ferreño | | Noticias, Noocyada Android
Dhowr maalmood ka hor waxaan ka hadalnay Android One iyo isbeddelkeeda suuqa, maxaad ka aqrisan kartaa. Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee noocan ah nidaamka qalliinka ayaa ah in Google dammaanad qaaday laba sano oo nidaamka cusbooneysiinta ah. Shaki la'aan, waa muuqaal ah in dadka isticmaala Android ay si qumman u qiimeeyaan, waana sababta ay u doortaan taleefan leh qaabkan qalliinka.
Laakiin, shalay warku wuxuu soo saaray Google-kaas ayaa meesha ka saaray qaybtii ka hadlaysay laba sano oo taageero ah oo ka socda bogga loo yaqaan 'Android One'. War ka mid ah warka oo kiciyey dhammaan qeylo-dhaanta ku saabsan isbeddelka suurtagalka ah ee siyaasadda noocyadan nidaamka qalliinka. In kastoo, waxay u muuqataa inaysan sidaas ahayn.
Kadib jahwareerka weyn ee ka dhashay shabakada, shirkadda lafteeda ayaa ku khasbanaatay inay iska horkeento wararkaas xan. Google waxay xaqiijineysaa inaysan jirin wax isbadal ah oo ku saabsan siyaasada cusbooneysiinta ee loo yaqaan 'Android One'. Marka labada sano ee nidaamka cusbooneysiinta ah wali waa isku mid
Xaqiiqdii waxay u tahay gargaar weyn dadka isticmaala. Maxaa yeelay haddii ay jiraan wax taas lagu gartaa Android One waa siyaasadeeda cusbooneysiinta weyn, wax ka adkaaday dadka isticmaala Android. Marka lagu daro sameynta bixinta taleefannada ayaa sii kordheysay waqtiga. Shan iyo toban telefoon cusub ayaa ku dhacay dukaamada sannadkan.
Si ay dadka isticmaala u nasan karaan Ma jiri doonaan wax isbadal ah arintan, Ugu yaraan maahan hadda. In kasta oo ay la yaab noqon lahayd haddii Google ay wax ka beddeli lahayd ama ka takhalusi lahayd waxa shaki la’aan ah qodobka ugu xooggan ee Android One. Waxay dhibaato weyn ku noqonaysaa horumarkooda suuqa.
Marka cusub moodooyinka la imanaya Android One suuqa 2019, waxay sii hayn doonaan labadan sano ee cusbooneysiinta. Waqtigaan la joogo ma ogin noocyada lagu sii deyn doono qaybtan nidaamka qalliinka. Laakiin sida xaqiiqada ah waan ogaan doonnaa wax badan oo soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Google waxay xaqiijineysaa inaysan jirin wax isbeddel ah oo ku saabsan siyaasadda cusbooneysiinta Android One
Sida loo haysto kamaradda Google Pixel ee Galaxy S9 ama Xusuusin 9 leh One UI